प्रियंका कार्कीलाई खड्काजीले दोस्रो अप्सरा बनाउने ? « Mazzako Online
प्रियंका कार्कीलाई खड्काजीले दोस्रो अप्सरा बनाउने ?
‘नाइ नभन्नु ल २’ चलचित्रका नायक अर्थात बाल कलाकार अनुभव रेग्मी चलचित्र प्रर्दशन हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहदा अकस्मत हराए । उनलाई खोज्न नायिका प्रियंका कार्की कहाँ मात्रै पुगिनन् । पर्दामा अनुभवकी आमा बनेकी नायिका कार्की अनुभवलाई खोज्दै ‘मेरी बास्सै’का खड्काजीको गाँउमा पनि पुगिन् ।
गाँउमा राम्री नायिका देखेपछि सबै लठ्ड । उनलाई फकाउने र आफ्नो बनाउन प्रयास गर्नेको लाईन नै लाग्छ । खड्काजीको घरमा पुगेका अनुभवलाई भेट्न गाँउ गएकी नायिकालाई खड्काजीको घरसम्म पुग्नै कठिन पर्छ ।
खड्काजीको घर खोज्दै हिडेकी उनलाई मुस्कान पासा देखि लिएर बल्छी धुरबे, दारी बा, मुलाको साग सबै आफ्नै घरमा लिएर जान चाहन्छ । अनेक थरिका कुरा गरेर भुल्याउन चाहन्छन, थरि थरिका सपना देख्छन् तर फिल्ममा हिरोको इन्ट्री झै खड्काजीले पनि इन्ट्री मारी नै हाल्छन् र अरु सबै हेरेको हे¥यै ।
“यति राम्री हिरोनी त कहिल्यै देखेको पनि थिईन र देख्न पनि नपरोस्” खड्काजी लजाउदै भन्छन् “मेरी अप्सरा पछि संसारकै सबैभन्दा राम्री प्रियंका नै हुन् । ” नायिका कार्कीलाई खडकाजी दोस्रो अप्सरा बनाउन पनि तयार देखिन्छन् ।
त्यसपछि के हुन्छ ? के प्रियंका कार्कीले खड्काजीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छिन त ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलाकार खड्काजी र नायिका कार्की बीचमा के के हुन्छ ? सबै जान्नको लागि भने आउदो मंगलबार प्रसारण हुने मेरी बास्सैको आगामी अंक नै हेर्नुपर्छ ।
चैत्र २८ गते रिलिज हुने चलचित्र ‘नाइ नभन्नु ल २’ को प्रोमोशन गर्न नायिका प्रियंका कार्की र बालकलाकार अनुभव रेग्मी यसपाली मेरी बास्सैमा देखिदैछन् । नायिका प्रियंका कार्की र अनुभव रेग्मी मेरी बास्सैमा आएको दृश्य शनिवार ठेचोमा खिचिएको हो ।
“सितारामजीसँग काम गर्दा यसै पनि रमाईलो नै हुन्छ झन मेरी बास्सैमा अभिनय गर्दा त झनै नौलो अनुभव भएको छ” नायिका कार्की भन्छिन् “हाँस्यब्यंग्य श्रंखलाको सुटिङ्ग अवधिभर रमाईलो नै रमाईलो हुदो रहेछ, जे होस मज्जा आयो ।” यता मेरी बास्सैका निर्देशक सिताराम कट्टेल धुर्मुसले पनि नायिकाको बारेमा राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । “प्रियंकाजीमा कमेडीको टाईमिङ्ग राम्रो छ” कट्टेलले भने “उहाँले दिनुभएको रियाक्सन पफेक्ट देखिएको छ ।”
बिकास आचार्य निर्देशित चलचित्र ‘नाइ नभन्नु ल २’ मा मेरी बास्सैका सिताराम कट्टेलले भने अभिनय गरेका छन् । तीनवटा फरक फरक क्यारेक्टरमा उनलाई चलचित्रमा हेर्न पाईनेछ । चलचित्रमा बाल कलाकार अनुभव रेग्मी र सुज्ञानी भट्टराई मुख्य भुमिकामा देखिएका छन् ।